Ny fandoavam-bola amin'ny WhatsApp dia mety ho vita tsy ho ela | Vaovao momba ny gadget
Mety ho vita tsy ho ela ny fandoavana vola amin'ny WhatsApp
Ny fandoavam-bola eo anelanelan'ny mpampiasa ity fampiharana fandefasan-kafatra ity dia mety ho dingana manaraka aorian'ny emoji vaovao izay ho tonga amin'ny fahavaratra. Tsy isalasalana fa ny fampiharana fampiharana fandefasana hafatra dia tsy manakana ireo mpampiasa tsy ampoizina, na amin'ny zavatra tsara na amin'ny ratsy, fa tato ho ato dia mametraka ny bateria ary indrindra amin'ny resaka fanavaozana ny fampiharana, sns. Amin'ity tranga ity dia safidy vaovao izany dia hanampy amin'ny fampiharana ny safidy fanaovana fandoavam-bola eo amin'ny samy mpanjifa amin'ny WhatsApp.
Ity, izay toa somary lavitra amintsika, amin'izao fotoana izao, dia mety ho akaiky kokoa noho ny inoantsika ary izany dia ny hoe hanao fifampiraharahana ny orinasa handray ity dingana ity any India, izay ananan'izy ireo mpampiasa maherin'ny 200 tapitrisa. Tadidio fa ny WhatsApp dia manana mpampiasa mavitrika 1.200 tapitrisa ankehitriny ary manampy ity fomba fandoavam-bola ity ho asa iray hafa mahaliana ho an'ireo mpampiasa azy noho ny fifanarahana izay toa nahatratra azy ireo tamin'ny UPI, ny governemanta indiana dia manohana ny rafitra fandoavam-bola amin'ny banky izay mety ho hita amin'ny fampiharana.
Mitohy ny fifampidinihana amin'ity lafiny ity ary efa elaela i Brian Acton, iray amin'ireo mpiara-manorina ny WhatsApp, no nihaona tamin'ny Minisitry ny Indostria India mba hamaritana ny rafitra fandoavam-bola misy eo amin'ireo mpisera ao India ao anatin'ny fangatahana fandefasan-kafatra izay an'ny ankehitriny. mankany amin'ny Facebook. Toa nahitam-bokany ny fifampiraharahana ary naseho tsikelikely ny antsipiriany mahaliana momba ity serivisy vaovao ity. Na izany na tsy izany, ny zavatra ananantsika eo ambony latabatra dia fiasa izay antenaina ho tonga amin'ny fotoana fohy, eny, miresaka izahay fa afaka 6 volana dia azon'izy ireo atao ny mampihatra an'io safidy io amin'ny fampiharana fa tsy mazava amintsika hoe hafiriana no hatao raiso hanitarana ny safidy any amin'ny firenen-kafa mandoa amin'ny WhatsApp.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Mety ho vita tsy ho ela ny fandoavana vola amin'ny WhatsApp
Raha ny filazan'i Samsung dia tsy ho tonga hatramin'ny 2019 ny efijery malefaka
Manolotra ny tahan'ny Go vaovao ny Orange miaraka amin'ny tombony lehibe ho an'ny mpampiasa